Ary na inona na inona no angatahinareo amin’ny fivavahana atao amin’ny finoana dia ho azonareo. – FJKM Ambavahadimitafo Ary na inona na inona no angatahinareo amin’ny fivavahana atao amin’ny finoana dia ho azonareo. |
Ary na inona na inona no angatahinareo amin’ny fivavahana atao amin’ny finoana dia ho azonareo.
Publié le 18 octobre 2020 à 04:10
Alahady 18 Oktobra 2020, itondrana am-bavaka ny fikambanana MAMRE.
Ny mpitandrina Randrianarisoa Alain no nitondra ny hafatr’Andriamanitra izay nalaina avy ao @ Matio 21 : 22
Matio 21 : 18-22 : « 18Ary nony niverina maraina hankany an-tanàna Izy, dia noana. 19Ary nahita hazo aviavy anankiray teo amoron-dalana Izy, dia nankeo aminy, kanjo tsy nahita na inona na inona teo aminy, afa-tsy ravina ihany; dia hoy Izy taminy: Aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay. Dia maina vetivety foana ilay hazo aviavy. 20Ary nony hitan’ny mpianatra izany, dia gaga izy ka nanao hoe: Nanao ahoana re no dia nahamaina vetivety io aviavy io? 21Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Lazaiko aminareo marina tokoa: Raha manam-pinoana ianareo ka tsy miahanahana, dia tsy izao natao tamin’ny aviavy izao ihany no ho vitanareo, fa raha hiteny amin’ity tendrombohitra ity aza ianareo ka hanao hoe: Mifindrà ianao, ka mianjerà any an-dranomasina, dia ho tonga izany. 22Ary na inona na inona no angatahinareo amin’ny fivavahana atao amin’ny finoana dia ho azonareo »